Garoowe oo lagu soo gabagabeyeey Shirki Afaraad ee Amniga Caasimada (dhegayso) – Radio Daljir
Seteembar 19, 2018 8:29 g 0
Magaalada Garoowe waxaa lagu soo gaba gabeeyay shirkii Afraad ee looga hadlayay Ilaalinta Nabad-galyada gobolka Nugaal ,waxaana shirkaa uu u socday Maalmihii lasoo dhaafay .
Ugu dambayntii waxaa laga soo saaray go’aamo dhowr ah waxaana ugu muhiim sanaa in la sameeyo ciidamada xasilinta caasimada kuwaas oo ciddii ay ku dilaan howl-gal dhanka amniga ah aan cidna loo raacan doonin ,qofkii iyaga kamid ah oo dhinta ay dawladdu bixin doonto magtiisa .
1:In la sameeyo ciidammada xasilinta caasimada .
2: in ciddii ay ku dilaan howl-gal aan cidna lagu lahayn .
3: Askarigii ku dhinta howl-gal ay dawladdu bixin doonto magtiisa .
Dhammaan Nabbaddoonadii goobta ku sugnaa ayaa saxiixay go’aamada waxaana la amray la dhaqan-geliyo go’aamada sidda ugu dhakhsaha badan .